Xasan Sheekh Maamuud ayaa maanta soo dhaweyn heerkeedu sarreeyo loogu sameeyay qasriga looga arrimiyo boqortooyada Saudi Arabia(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Xasan Sheekh Maamuud ayaa maanta soo dhaweyn heerkeedu sarreeyo loogu sameeyay qasriga looga arrimiyo boqortooyada Saudi Arabia(Daawo Sawirada)
Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maamuud ayaa maanta soo dhaweyn heerkeedu sarreeyo loogu sameeyay qasriga looga arrimiyo boqortooyada Saudi Arabia oo ay booqasho rasmi ah ku joogaan isaga iyo wafdi uu hogaaminayao.
Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay boqorka dalka Saudi Arabaia boqor Salmaan Bin Abdiaziz Aala Sacuud, iyadoo ay wehliyaan wasiirrada Arrimaha dibedda, warfaafinta, Maaliyadda iyo taliyaha ciidanka nabadsugida Qaranka.
Golayaasha dowladda Saudi arabia ayaa u dhammaa kulankan laba geesoodka ah ee dhexmaray labada dowladood waxaana ay dowladda Sacudi arabia ballan qaadday inay Soomaaliya ka caawineyso arrimaha dib u dhiska, shaqaaleyn dad Soomaaliyeed oo dalka ka howlgeli doona iyo taageero dhinacyo badan.
Wasiirrada la socday madaxweynaha ayaa la kulmay dhiggooda wadanka iyagoo arrimo badan isla meel dhigay.
Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in Boqorku u sheegay inay Somaliya ay garab taaganyihiin islamarkaana wufuud ka socota Sacuudiga ay tegi doonaan Soomaaliya, Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” ayaa sheegay in dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ay calaaqaadka caalamka la leeyahay uu meel sare gaarsiisay.
Kulan ku aadanaa dib u eegista Dastuurka oo ay soo agaasintay Wasaaradda Dastuurka ayaa lagu qabtay xarunta Villa Hargeysa
Dhalinyaro lagu eedeeyay inay ka tirsan Alshabaab oo la xukumay halka qaar kalana la sii daayay